Mitambo, 01 Gumiguru 2017
Svondo 1 Gumiguru 2017
Caps United Inoshayisa Dynamos Mufaro
Caps United yakatadzisa Dynamos kutora hutungamiri hwemakundano eCastle Lager Premier Soccer League mushure mekurova chikwata change chichipisa ichi neSvondo.
Gunyana 15, 2017
Dynamos Yosangana neCaps United neSvondo
Chikwata cheDynamos chawana mukana wekuenda pamusoro pemakundano eCastle Lager Premier Soccer League kekutanga kubvira makundano emwaka uno atanga.
Dynamos Yoshura Mare muMakwikwi eCastle Premier Soccer League
Chikwata cheDynamos chasimbisa mukana wacho wekutora mukombe weCastle Lager Premier Soccer League nekudambura chikwata chinovatambudza cheCaps United. Dynamos yakafadza vateveri vayo mushure mekunge chikwata ichi chakadambura Caps United 2-0 pamberi pechaunga chaityisa muNational Sports Stadium nemusi weSvondo.
Gunyana 01, 2017
Dynamos Yotatsurana neCaps United kuNational Sports Stadium neSvondo
Nzira dzese dzichange dzakananga kuNational Sports Stadium nemusi weSvondo uko kunenge kuine machikichori emutambo wenhabvu.
Makwikwi eMukombe WeCastle Lager Premier League Obvira Moto
Zvikwata zvese zviri kurwira mukombe weCastle Lager Premier Soccer League zvakakunda mumitambo yazvo zvichisiya pasina shanduko muhutungamiri hwemakwikwi aya.
Chikwata cheDynamos Chave Pedyo neKuenda Panhongonya yeCastle Lager Premier League
Dynamos yasiiwa nemapoinzi matatu chete nechikwata chiri kutungamira makundano eCastle Lager Premier Soccer League cheChicken Inn zvekuti vatsigiri vechikwata ichi vari kuona mutambo wavo neYadah muRufaro Stadium neSvondo seuyo uchavaendesa pamusoro pegungano reCastle Premier Soccer League
VaTsigiri veCaps United Vobatana neveDembare Mukupemberera Kukundwa kweNgezi Platinum neMakapekepe
Vaitaura kuti chikwata chine mukombe weCastle Lager Premier Soccer League che Caps United chaenda kumawere vakapihwa mamwe mafungiro nemaGreen Machine muRufaro Stadium nemusi weSvondo.
ZIFA Yomisa Mitambo yeCastle Premier Soccer League paZororo reMagamba
Makundano enhabvu yepamusoro eCastle Lager Premier Soccer League ambomiswa svondo rino, panguva iyo makundano anoteverwa nechaunga eEnglish Premier Soccer League arikupfungaidza utsi.
Vaimbi vemuZimbabwe Vobudirira Vari Kunze Kwenyika
Kunyange hazvo vachisangana nematambudziko akawanda, vaimbi ava vanoti vari kuita basa ravo vachibudirira vari kunyika dzakaita seSouth Africa, America neAustralia uko vari kuvaraidza vanhu nenziyo dzavo.
Ngezi Platinum Yotungamira muMakundano eCastle Lager Premier League
Chikwata cheCaps United chiri kupembererawo kukunda kwacho mumutambo wacho wekutanga mumitambo mitanhatu panguva iyo makundano eCastle Lager Premier Soccer League ave nemutungamiri mutsva.
Chikunguru 28, 2017
Mitambo yeNhabvu Yodzokera kuRufaro Stadium Kutanga neMugovera
Nhandare iyi yakapedzisira kushandiswa pakapera mitambo yenhabvu yemwaka wapera ichigadziriswa mushure mekubviswa kwehuswa hwemugadzirirwa.